ကိုယ်ပိုင် ကားဂိုထောင် ကို နေရာမရွေးကနေ လှမ်း‌ဖွင့်ပေးနိုင်မယ့် Mitsubishi ရဲ့ Eclipse Cross ! – MyMedia Myanmar
ကိုယ်ပိုင် ကားဂိုထောင် ကို နေရာမရွေးကနေ လှမ်း‌ဖွင့်ပေးနိုင်မယ့် Mitsubishi ရဲ့ Eclipse Cross !
ခရီး တစ်ခု ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင် အိမ်က ကားဂိုထောင်ကို သေချာမှပိတ်ခဲ့ရဲ့လားဆိုတဲ့ ပြဿနာ ကိုတော့ ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ တ ကယ်လို့ မေ့ခဲ့တယ် ဆိုရင်လည်း ကားကို တကူးတက ပြန်လှည့်ပြီး ပိတ်စရာမလိုတော့အောင်လို့ Mitsubishi ကနေ နည်းပညာ တစ်ခုနဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်ပါပြီ။ အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ် ကတော့ myQ Connected Garage လို့ အမည်ရပြီး My Mitsubishi Connect Platform အစီအစဉ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အစီအစဉ် အသစ်ကတော့ ကားရဲ့ အတွင်းခန်း Dashboard ပေါ်က နေပဲ အိမ်က ကားဂိုထောင် တံခါးကို လွယ်လင့်တကူ အပိတ် အဖွင့် လုပ်လို့ရအောင် စီမံထားမယ့် သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Automotive For Chamberlain Group ရဲ့ Vice President General Manager ဖြစ်သူ James Trainor က ပြောကြား ရာမှာတော့ ဒီကနေ့ ခေတ် ယာဉ်မောင်းတွေဟာ သူတို့ ရဲ့ ကားနဲ့အတူ ဂိုထောင် အနားကို ရောက်နေမှ သာလျှင် တံခါး အဖွင့်အပိတ် လုပ်လို့ ရမှာ ဖြစ်နေတာက အကန့်အသတ်လိုပါပဲ လို့ ဆိုသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလိုမျိုး မောင်းနှင်မှု အတွေ့အကြုံတွေကို တိုးတက်လာစေဖို့ အတွက် ကုမ္ပဏီဟာ Mitsubishi နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အခု စနစ်ကို တီထွင်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် myQ Smart Vehicle Access စနစ် ကလည်း ကားရဲ့ အတွင်းခန်းမှာရှိတဲ့ Touchscreen ကနေ တစ်ဆင့် လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ဂိုထောင် တံခါးတစ်ချပ်ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ကာ ယာဉ်မောင်းတွေ အနေနဲ့လည်း ခရီးရဲ့ ဘယ်နေရာကိုပဲ ရောက်ရောက် အိမ်ရဲ့ ဂိုထောင် တံခါးကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ Trainor က ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ အခု စနစ် အသစ်မှာတော့ ယာဉ်မောင်းဟာ ဂိုဒေါင်တံခါးကို ထိန်းချုပ် နိုင်ဖို့ အတွက် မြင်ကွင်းရှေ့ကို ရောက်ရှိနေစရာကို မလိုအပ်ပဲ ဘယ်နေရာကမဆို ထိန်းချုပ်နိုင် မှာပါ။ အခုလို အစီအစဉ် ကြောင့်လည်း ကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အိမ်သော့ ကျန်ခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့အိမ်ကို အခြားဧည့်သည် တစ် ယောက်ယောက်လာဖို့ ရှိလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူကိုပဲ ဖွင့် ပေးနိုင်မယ့် သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စနစ် အသစ်ကိုတော့ လာမယ့် 2022 Mitsubishi Eclipse Cross မှာ စတင် ပြီး ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ကာ သိသာထင်ရှားတဲ့ Facelift အပြောင်းအလဲကိုလည်း အဆိုပါ ကားမှာ ပြုလုပ်လာမှာပါ။ အခု စနစ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက်ကတော့ ကားမှာပါဝင်တဲ့ ရှစ်လက်မ အရွယ် Display ကနေ လုပ်ဆောင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Smartphone နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ထားနိုင်မယ့် Display Audio ( SDA ) စနစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Mitsubishi ဘက်က တော့ အခု စနစ်အသစ်ကို နာမည်ကြီး Service တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Apple Carplay နဲ့ Android Auto စနစ်တို့နဲ့ပါ ချိတ်ဆက်သွားဖို့ ပြင်ဆင် နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါနည်းပညာမှာပဲကားရဲ့ Windshield တွေနဲ့ Sun Visors တွေကို သန့်စင်အောင်အလို‌အလျောက် ပြုလုပ်ပေး ဦးမှာ ဖြစ်ပြီး ယာဉ်မောင်းတွေ အနေနဲ့ ဂိုထောင် တံခါးကို ဖွင့်ဖို့ အတွက် သမားရိုးကျလိုမျိုး Visor ပေါ်က Door Opener ကိုတောင် နှိပ် စရာ မလိုတော့သလို အမိုး Liner ပေါ်မှာလည်း အခြားသော ထိန်းချုပ်ရေး ခလုတ်တွေ တကူးတက ထပ်မံထည့်သွင်းစရာ မလိုတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း နာမည်ကြီး ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Audi ကပါ အဆိုပါ စနစ်လိုမျိုး စနစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ဖို့ ရှိနေပြီး အလိုအ လျောက် ပါဝင်ထားပြီးသား Toll Pass စနစ်လည်းပါဝင်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ယာဉ်မောင်းတွေဟာ အဆိုပါ နည်းပညာ မြင့် ကားတွေကို မောင်းနှင်မယ်ဆိုရင်အရင်လိုမျိုး Windshield တွေအပေါ် အာရုံစိုက်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Mitsubishi ရဲ့ အဆိုအရ တော့ 2018 ကနေ 2020 Eclipse Cross ပိုင်ရှင်တွေ ဟာလည်း အဆိုပါ စနစ်ကိုရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး My Mitsubishi Connect App ထဲက myQ Connected Garage ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု လုပ်ဆောင်ချက် ရဲ့ ကားအတွင်း In-Dash Version ကို ရရှိ နိုင်ဖို့ ဆိုရင်တော့ My Mitsubishi Connect App ထဲက Services Page ကနေ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ကာ myQ Connected Garage ကို နှိပ်ပြီး လုပ်ဆောင် နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ နေရာမှာ ပဲ myQ Smart Garage-Enabled Door Opener ဆိုတဲ့ ခလုတ် ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး တွေ့ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ Add A Hub ဆိုတာ လေးကို နှိပ်ကာ ဝန်ဆောင်မှု ကို စတင် အသုံးပြုနိုင်တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
The post ကိုယ်ပိုင် ကားဂိုထောင် ကို နေရာမရွေးကနေ လှမ်း‌ဖွင့်ပေးနိုင်မယ့် Mitsubishi ရဲ့ Eclipse Cross ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-19T12:30:57+06:30January 19th, 2021|MYCARS MYANMAR|